Mpanely tsaho amin` ny tambajotran-tserasera Hiditra an-tsehatra ny ministeran` ny fitsarana
Hita amin` izao fa sarotra ny zava-misy eto amin` izao tontolo izao mahakasika ny valan’aretina “coronavirus”.
Manoloana izany dia misy no manely vaovao tsy marina eny anivon` ny tambajotra serasera. Misy kosa ireo manaparitaka ny vaovao fotsiny. Misy indray ireo minia manakorontana saim-bahoaka sy filaminam-bahoaka. “Miroborobo tokoa ny demokrasia eto Madagasikara. Ny fitaratra amin` izany dia ny fahalalahana miteny kanefa mila hampianarina ny Malagasy. Ekena fa misy ny demokrasia. Misy ihany koa ny zo sy fahalalahana hiteny fa tokony atao ao anatin` ny fanajana ny lalàna sy fanajàna ny mpiara belona” hoy Imbiki Herilaza, sekretera jeneralin` ny minsiteran` ny fitsarana. Nomarihany fa ny lalàna mahakasika ny serasera sy ny lalàna momba ny “cybercriminalité” no manenjika sy manasazy ireo milaza vaovao tsy marina amin`ireny tambajotra serasera. Amin` izao dia misy ny fampianarana sy fampitandremana izay nataon` ny ministeran` ny serasera. Manamafy izany ihany koa ireo ministera misahana ny filaminam-bahoaka. Nanantintrantitra kosa i Imbiki Herilaza fa rehefa mbola misy ny fanenjehana ho an` ireo izay minia manely vaovao tsy marina, indrindra fa manakorontana ny filaminam-bahoaka mahakasika ity “coronavirus” dia mazava ho azy dia mety hisy ny fandraisana fepetra ka hiditra an-tsehatra ny ministeran` ny fitsarana.